Fapstronaut အသစ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲနေသူကိုပြန်ကောင်းလာစေရန်အကြံဥာဏ်အချို့ - သင်၏ Brain On Porn
နယူး Fapstronaut, ရှေးကာလအချို့သောအကြံပေးချက်များနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲပြန်လည်ထူထောင်
ငါ nofap မှာ newb ဖြစ်ကြောင်းကိုသော်လည်းကျွန်မဘိန်းဖြူကိုချွတ်ရ 12 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသောက်မှစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ထိုအချိန်မှစ. စင်ကြယ်သောပါပြီ။ ထိုကာလအတောအတွင်းငါသည်ငါ၏တစ်ခုလုံးကိုဘဝကိုပြန်တည်ဆောက်။ ယခုတွင်ငါသည်အောင်မြင်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်လှပသောမိသားစုရှိသည်။ ငါအတူတူကအားလုံးကိုသူကောင်လေးအဖြစ်ရှုမြင်ပေမယ့်အမှန်တရားကနေဝေးခဲ့ကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ဘို့ဖြစ်၏။ ငါ၏အစွဲလမ်းလမ်းအသစ်နှင့်တောက်ပအခြားအရာတစ်ခုခုပေါ်ကို latched ခဲ့ကြောင်းနှင့် PMO ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာကျွန်တော့်ဘဝမှာမကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုစတင်ဖန်တီးဖို့ပါဘဲ၊ ကျွန်တော့်ဇနီးကိုအိပ်ရာထဲကနေရှောင်ထွက်ခြင်း၊ 'mode by' mode 'ထဲရောက်နေတာပါ။ ။ ကျွန်တော့်ကိုဖေဖေ၊ ခင်ပွန်း၊ သား၊ ညီဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတစ်ယောက်တည်းနေတော့ဒါမှမဟုတ်တခြားသူတွေအိပ်ပျော်သွားတာနဲ့အမျှကျွန်တော့်ခြေဆစ်တွေ၊ အိမ်သာသုံးစက္ကူတွေ၊ ။ ၎င်း၏အဆိုးဆုံးမှာသိမှု Dissonance ။
PMO အတွင်းကနေတဖြည်းဖြည်းငါ့ကိုသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည်။ ငါကအားလုံးကိုငါ့အဘို့သွားတာပေါ့, ငါ Shit နဲ့တူသလိုခံစားရတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, အဘယ်ကြောင့်ငါသည်ဤ post ကိုအောင်ငါ? ကောင်းပြီ (မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်သေစာထံမှ) တစ်ဦးပြန်လည်စှဲလမျးသူအဖြစ်အားလုံးငါ့အချိန်ကာလအတွင်းကျွန်မသန့်ရှင်းတဲ့နေဖို့ကကူညီပေးခဲ့ကြောင်း tools တွေအများကြီးတက်ခူး။ ဤရွေ့ကားတစ်ဖန် nofap စဉ်အတွင်းငါ့ထံသို့ကျနော်တို့မှာအများကြီးအဖိုးတန်သက်သေပြရှိသည်။ ငါသူတို့အခြားညီအစ်ကိုနှမထွက်ကူညီဖို့အမှု၌ကဒီမှာသူတို့ကိုမျှဝေဖို့ကောင်းတစ်ဦးအရာဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်။
ဒါကြောင့်သင်လိုအပ်တာကိုယူပါ၊ သင်မလုပ်ခဲ့သောအရာကိုစွန့ ်၍ သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်သောအရာကိုလုပ်ပါ။
ရုံယနေ့တွင်များအတွက် ၂၄ နာရီပြတင်းပေါက်များ၌ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နိုင်သည်ကိုအမြဲသတိရသင့်သည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်ကျန်ရှိနေသေးသောဘဝများ၊ ရက်ပေါင်း ၉၀ / ရက်ပေါင်း ၃၀ / ၇ ရက်။ ယင်းအစား၎င်းသည်ယနေ့အတွက်သာဖြစ်သည်၊ မနက်ဖြန်မရှိသေးပါ။ တစ်နေ့လုပ်ရန်ပင်စဉ်းစားလွန်းပြီးတပ်မက်စိတ်များကဆူပူသောင်းကျန်းလာလျှင်“ ငါတစ်နာရီလောက်ဘာမှမလုပ်ဘူး၊ ပြီးတော့ပြန်လည်သုံးသပ်မယ်” ဟုသင့်ကိုယ်သင်ပြောပါ။ အဲဒီအချိန်ကတည်းကအချိန်ကုန်လွန်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အာမခံပါတယ်။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်သတိရပါ သင်သည်သင်၏စွဲလမ်းမှုဟောင်းကိုမြင်ယောင်ပြီး၎င်းကိုသင့်စိတ်တွင်ပြန်လည်အသက်ဝင်လာစေရန်ဤနေရာတွင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောအလွန်ပြင်းထန်သောကြောင့်၎င်းသည် PMO အမဲလိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများအကဲဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့တူညီသော serotonin ထုတ်လွှတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သင်ဤရပ်တန့်လုပ်နေတာတွေ့ပါက! ဒါကလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတဲ့တစ်ခုတည်းသောနေရာမှာအဆုံးသတ်သွားတာပါ။ မှတ်တမ်းအတွက်၊ မင်းတို့စိတ်ထဲမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ hardcore မြင်ကွင်းများကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ ခြားနားချက်ကိုသင်သေချာမသိသေးလျှင် 'caress' ဟူသောစကားလုံးနှင့် 'gagging' ဟူသောစကားလုံး၏ခြားနားချက်ကိုစဉ်းစားပါ။
အခြို့သောရှုထောင့်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့် get (ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းမျှနှင့်အတူ) ကိုယ့်ကိုယ်အားဖြင့်သေးငယ်တဲ့တိတ်ဆိတ်တစ်ဝက်နာရီရှိသည်ဖို့ကြိုးစားပါနှင့်နေ့ရက်တိုင်းအပန်းဖြေ။ ဒီဝက်နာရီအတွင်းမှာတော့အသက်တာ၏ပိုကောင်းတဲ့ရှုထောင့်အရနှင့်သင်အသစ်ကလူတစ်ဦးကိုစဉ်းစားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်နောက်ကျောအပေါ်အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် pats အများကြီးပေးပါ။ သငျသညျ ပို. ပင်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်သည်ရှိရာထိုအခါတစ်စုံတစ်ဦးစသည်တို့မှစိတ်မကောင်းဟူမူကား, ကားတက်ကိုပြုပြင်တာတွေ, အမျက်ထွက်ရတဲ့မဟုတ်ကဲ့သို့တွေ့မြင် (သို့သော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချချပြီးသို့ကျသွားဘယ်တော့မှ!) ။
ရပ်ရွာ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရယူလိုက်ပါ တစ်ဦးတတ်ပြီးသင်တာမျိုးသောအခါ, တစ်နေရာရာနဲ့တူမျှပိုမိုကောင်းမွန်ရာအရပျရှိ / r / nofap /။ ဒါကြောင့်အရာဝတ္ထုတွေအလယ်မှာထားပါ။ ထို့အပြင်၎င်းတို့တွင် NA / AA တွင် 'အသစ်ရောက်ရှိလာသူများနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း' ဟုခေါ်ဆိုသောအရာရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာလူသစ်များနှင့်ရုန်းကန်နေရသောလူများအားနားထောင်ရန်သို့မဟုတ်နားမထောင်ရန်ကြိုးစားခြင်းကိုဆိုလိုသည်၊ လူတွေလိုအပ်တယ် အယူအဆကတော့သူဟာသင့်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတာ၊ သူတစ်ပါးကိုကူညီဖို့ကြိုးစားရတာကိုသင်နှစ်သက်သလိုကောင်းတယ်၊ သူတစ်ပါးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတဲ့သူတစ်ယောက်အကြောင်းစဉ်းစားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြောင်းမိဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်။
လေ့ကျင့် ဒါကအကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင့်ကောင်းတယ်။ ၎င်းသည်သင့်အားတွန်းအားပေးမှုမှလွင့်စင်သွားစေနိုင်သည်။ ၎င်းနောက်သင်အားအင်ဖောင့်ထုတ်လွှတ်မှုအပြီးတွင်အလွန်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပြီးသင်အမှန်တကယ်မခံစားလိုသော၊ ဒါ့အပြင်သူကပုံသဏ္inာန်ရတဲ့များအတွက်သင်တန်းကြီးလှ၏။
နယူး Fapstronaut, ရှေးကာလအချို့သောအကြံပေးချက်များနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲပြန်လည်ထူထောင်။ (self.NoFap)